Namhlanje ndaphinda ndaya kwi "Roma" ukuba ndiyisele indebe yecafisi elimnandi kwaye "ndiphulaphule" into eyenzekayo kwihlabathi. Ukukhangela kwam kumile kwintombazana engamashumi amathathu anesihlanu, enhle, ekulungele kakuhle, shishini ... Kwaye ndacinga ukuba: "Ihlabathi layitshintsha njani loo mfazi! Ukusuka kwindlu yomfazi oye waba ngumfazi weshishini, okanye njengoko kuthiwa ngoku. Hayi, ndacinga. "Andikwazi ukwenza oko." Esi sipho esikhulu sokuba ngumfazi wamanje! "
Emva kokucinga kwam, ndanduluka ukuze ndiqonde umbuzo othi: "Yintoni enokuphumelela kwindodakazi yanamhlanje nokuba ingaba njani, kwaye ingaba kufuneka yenziwe na?"
Ihlabathi lanamhlanje ligxeka imithetho yalo, kwaye ukuba sisele sihamba kunye namaxesha, kungcono ukuba singayi kumisa. Yintoni (yehlabathi) yenzani nalo mfazi? Waphenduka unina nomfazi wendlu, umgcini wentsapho yecala, ibe ngumfazi ozimeleyo onokuzimeleyo onobunini bempahla kunye neenkonzo. Ibhinqa liphakamisa abantwana, lifumana imali, linyamekela, lugqoke kakuhle, lwenzeka kwiindawo ezahlukahlukeneyo zelizwe "," zivame ukutshaya kunye "neziphuzo", ngokumodareyitha. Hayi, le ntokazi ayizange ibe yindoda, yafunyanwa ngokuzimela kwaye ezinye okanye zizimeleyo.
Ngaba yonke impumelelo yowesifazane uyayifumana, okanye ingakumbi idonsela ebukhosini bebomi? Kunzima ukuphendula lo mbuzo ngokuqinisekileyo, kuba bonke abantu, ngokukodwa abafazi, baneemfuno zabo zomntu ngamnye nomphefumlo. Omnye umfazi, umzekelo, uhlangabezana nayo yonke imisebenzi ayimisile kwaye unokuyenza yonke into ngokulula, kodwa omnye akakwazi ukuzenzela imisebenzi emininzi yobomi. Ngamnye ngamnye. Nangona, kwiimeko ezininzi, kufuneka uhlambele into ethile. Ukuba umgomo ngumsebenzi, ngoko intsapho kunye nothando ziya kwindawo yesibini, kwaye ngokufanayo. Ngokuqhelekileyo kufuneka uqaphele ukuba, ngaphandle kokuba nexesha lokuhamba ngekhefu lokubeleka, ibhinqa ngokukhawuleza libuya kuye lize lenze ngokubanzi kunokwenzeka kwimisebenzi yalo kwaye landise inhlalakahle yobomi bayo. Ngelo xesha, akaqapheli ukuba umntwana wakhe ukhula njani, kwaye emva kweminyaka ikhalaza ukuba (umntwana) akayiqondi nhlobo.
Ewe, kunzima ukuba ngumfazi wamanje, kodwa, ngakolunye uhlangothi, kulula ukuba ngumfazi kwihlabathi lanamhlanje apho umatshini wokuhlamba uhlamba, kunye nemveliso egqityiweyo ilungiselelwe kwiivenkile. Yintoni efunekayo ukuze uphumelele? Okokuqala, ukuhlakulela okanye ukuphuhlisa iimpawu ezithile. Ngazo kwaye uthethe.
Umfazi wesimanje kufuneka abe nenjongo , azi ukuba ufuna ntoni na. Iinjongo eziqulunqwe ngokucacileyo kwaye zenziwe zifezekiswe lula, nokuba ngumtshato ophumelelayo okanye ukukhuthazwa kwinqanaba lomsebenzi. Owesifazane ojoliswe kwiinjongo uyazi ukuba uya kutshata, bangaphi abantwana abaya kuba nabo, kunye nokuba uya kuzuza phi.
Ukuzimela kuyinto esemqoka esemgangathweni kwintombi. Akunakufuneka uthembele kwintanda yakho kuyo yonke into. Ebomini, nantoni na eyenzekayo (umntu akanako ukuzithemba ngokupheleleyo kunye nokuthembela ngokupheleleyo kwisigqibo sesibini), kwaye kwimeko enjalo umfazi ozimelayo akayi kumangaliswa. Ngakolunye uhlangothi, akudingeki ukuba uzimelele kwaye uzimelele kukho konke. Makhe umntu abe ngumntu; umzekelo, ukunyamekela kwivenkile yokutyela kwaye uyihlawule.
Ndicinga ukuba umfazi wesimanje kufuneka akwazi ukuzibonakalisa, ujonge i-100% okanye ngaphezulu . Ngako oko, akusayi kuze kube lula ukuqonda izakhono zokwenza, ukuqonda imifashiselo yefestile kunye nokuya kwiqela lezempilo. Ngaloo ndlela, ifuthe eliphindwe kabini lifezekile: le ntokazi ibonakala ilungileyo kwaye ifumana iimvakalelo ezongezelelweyo ezivela ebuhleni bayo nokuzilungisa. Ukuzivocavoca umzimba okongeziweyo kunceda ukugcina ukuvisisana komfanekiso, ukubonakaliswa kwempilweni enempilo nokuqinisa imo-mpilo, nto ibaluleke kakhulu kwisigxina somdla.
Ukuhlaziya ezinye iimpawu kunye nezakhono, ndafumanisa ukuba kubalulekile ukuba ibhinqa likwazi ukuqhuba imoto, yazi ezininzi iilwimi zasemzini, zenze ubuncinane ubuncinane bezemfundo ezimbini, zikwazi ukudlala imfesane njengoko ziyimfuneko, zikwazi ukufundisa abantwana, kunye nokumomotheka nokukhupha iimvakalelo ezintle. Kwakulungile ukuqonda i-theory of gestures , ukuba ukwazi ukuthetha kakuhle, uhambe uhlale . Kwakhona kubalulekile ukufunda indlela yokwenza izinto ezintathu ngokukhawuleza kwaye ube kwiindawo eziliqela ngexesha elifanayo (ngethamsanqa, ukuba nenxibelelwano ephathekayo ngale ndlela kwenza ubomi kube lula ngathi). Ngomthwalo ophezulu wokusebenza owufunayo ukuze ufunde ukuphumla ngeli thuba elincinci, naphi na.
Ucela, kodwa kuthekani malunga nentsapho ? Nantoni na "ethatha" kwizandla zakhe zincinci izandla kufuneka ahlale eselumfazi - onobubele, onobubele, obusetyhini. Umfazi oyinyaniso usoloko efudumele kwaye epholile endlwini, ucola abantwana abancinci, abathulile nabonwabileyo.
Kungakhathaliseki ukuba ihlabathi liguquka njani, sihlala simele. Awudingi ukuthatha zonke iinkxalabo zeli hlabathi, udinga indoda ukuba ibe yindoda, kwaye ngenxa yoko, umfazi kufuneka abe ngumfazi. Oko umfazi onamhlanje ophumelelayo ongenakwenzayo akuxhomekeke kwintlalontle yenkxaso ethile, kodwa nakwintlalontle yabantu abanobubi kakhulu behlabathi, amadoda nabantwana. Kwaye nangona ebomini ungenayo ixesha, cinga ukuba uye waxelela amagama abalulekileyo kwiintsapho zakho ngokuthi "Ndiyathanda, ndiyakholwa, ndiyayithanda" ... Awuyi kuze ufumane yonke imali, awuyi kufinyelela kuzo zonke iingqungquthela, ngoko kufuneka ucinge , njengokuba ezinye zichazwe, i-mundane, kodwa malunga neyona nto ibalulekileyo. Isisiseko esisiseko, umphumo wentsapho, asikhenxiswanga okwamanje.
"Ewe, othandekayo, ndiya kubuya emva kwangoko." Umnqophiso wasayinwa, ngoko ngoku ungaya elwandle ngokukhuselekileyo, - waphendula, njengoko uNataliya wabuya, kumyeni wakhe kwifowuni. Washiya i-cafe, wangena emotweni yakhe waza waya kumntu othandekayo ukuba abe nomnene, onothambileyo, onokutshatyalaliswa kwaye onothando "owesifazane ophumelelayo wamanje" ...
Kuthekani ukuba izisongelo zobomi zifikile?
Ukukhawuleza kwipinki. I-BWT entsha inkxaso yeFormula1
Ndingaba njani neqela le-bachelorette?
Ziziphi iintyatyambo ezinikela emtshatweni - iingcebiso zomhloli wezityalo
Isobho se-Broccoli kunye noshizi
Iipotato zeepatato kunye ne-paprika
Bali: iparadesi yabathanda inkululeko
Afrodisiacs - iimveliso zamadoda
Ukucwina nokukhangela kwesikhumba ebusweni
Iqela le-mushroom leSolyanka
Ukukhetha Isithuthi seNtana
I-Horoscope ngo-Septemba 2016 yeSagittarius
Indlela yokulungiselela umntwana omdala ngokuzalwa komntwana omncinci?
Umhlobo wokuqala kunye nonina
Rash ngezifo ezahlukahlukeneyo kubantwana